यसकारण डिभिजन-टूमा राम्रो नखेले नेपाली क्रिकेट सकिन्छ ! | TajaKhabarTV
यसकारण डिभिजन-टूमा राम्रो नखेले नेपाली क्रिकेट सकिन्छ !
२०७४, २५ पुष मंगलवार २१:१६ January 9, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
२५ पुस, काठमाडौं । अर्को महिना नामिबियामा हुने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूका लागि नेपाली टोलीले तयार सुरु गरेको छ । यो नेपालका लागि एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना पूरा गर्ने अन्तिम बाटो मात्र होइन, नेपाली क्रिकेटको भविश्यसँग पनि जोडिएको छ ।
डिभिजन टूमा नेपालसँगै केन्या, यूएई, नामिबिया, क्यानडा र ओमान छन् । पाँच खेल खेल्दा डिभिजन टूको शीर्ष दुई टोली डिभिजन वानमा उक्लिनका साथै जिम्बाबेमा हुने विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दु:खको खबर !! यसकारण आईसीसीले गर्दैछ नेपाली क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध ( भिडियो सहित )
नेपाली टोलीका लक्ष्य डिभिजन वानमा उक्लिने र विश्वकप छनोट खेल्ने नै हो तर, यदि माथिल्लो डिभिजनमा उक्लिन सकिएन भने नेपाली क्रिकेटको भविश्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।
डिभिजन-टूमा राम्रो गर्न सकिएन भने ?
‘हाम्रो क्रिकेट सकिन्छ’ प्रशिक्षक जगत टमाटा प्रष्ट छन् । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रशिक्षक टमाटाले भने, ‘म ठोकेर भन्छु, यदि हामी डिभिजन वानमा पुग्न सकेनौं भने नेपालमा क्रिकेट सकिन्छ, कसैले म हुँ भन्दैमा क्रिकेट बच्दैन ।’
पुवुदु दशानायकेले छाडेपछि टमाटाले प्रशिक्षको भूमिका निभाउँदै आएका छन् । क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहेकाले खेलाडी छनोटमा पनि प्रशिक्षक र कप्तान पारस खड्का नै निर्णायक छन् । उनकाअनुसार डिभिवन वानमा रहेकाले मात्र आईसीसीले क्रिकेट संघ निलम्बन रहेका बेला पनि लगानी गरिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : क्रिकेटको कपि गर्दै फुटबल , थर्ड अम्पायर जस्तै भिएअार प्रयोग, के हो भिएअार ? ( भिडियो सहित )
तर, यदि डिटिजन टूमा राम्रो प्रदर्शन भएन र वानमा उक्लिएन भने आईसीसीले क्रिकेट संघको सदस्यता खारेज नै गर्नेसम्मको डर रहेको प्रशिक्षक टमाटाले बताए । ‘प्रशासनिक संरचना केही छैन, खेलाडी छनोट प्रशिक्षक र कप्तानले गर्नुपरेको छ, घरेलु क्रिकेट ध्वस्त छ’ टमाटाले दुःख व्यक्त गरे ।
‘यो हाम्रा लागि अन्तिम अवसर हो, जहाँ हामी डिभिजन वानका साथै विश्वकप छनोटसम्म पुग्नुछ’ प्रशिक्षकले भने, ‘प्रयास गछौं कि विश्वकप छनोटमा पुग्न सकौं, त्यसका लागि खेलाडीले शतप्रतिशत दिनेछन् ।’
युवा खेलाडीकै भर
सन् २०१० देखि २०१४ को बीचमा डिभिजन ५ बाट वानसम्म पुग्नुका साथै टी-२० विश्वकप खेलेको नेपालको पछिल्लो प्रदर्शन सन्तोषजनक छैन । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणको खेलमा युएईबिरुद्धको नेपालको प्रदर्शन पछिल्लो उदाहरण हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : किङ कोहली ५ रनमा आउट हुँदा अनुस्कालाई यस्तो दोष ! बिह गरेर घट्यो कोहलीको पावर ?
लगातार सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न नसकेपछि केहि सिनियर खेलाडीलाई टिमबाट ‘ड्रप’ गरिएको छ । पछिल्लो समय विकेटकिपरको समेत जिम्मेबारी लिइरहेका बिनोद भण्डारी, अलराउण्डर सागर पुन, नरेश बुढायर, राजेश पुलामीहरु टिममा छैनन् । सुवास खकुरेल टिममा पर्न छाडेकोे धेरै भइसक्यो ।
यो पटक नेपाली टोलीमा युवा खेलाडीहरुको बाहुल्यता छ । प्रशिक्षक टमाटाकै भाषामा आसन्न डिभिजन टू मुख्यतः युवा खेलाडीकै भरमा छ । सिनियर टोलीका ५ खेलाडी मात्र अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छन् ।
तर, सबै उमेरसमूहको अनुभव लिएर आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समस्या नहुने प्रशिक्षक टमाटाको भनाइ छ । ‘यू-१९ खेलेर आएका हुनाले समस्या छैन, बरु उनीहरुलाई कहाँ स्थापित गराउने भनेर तयारी गरिरहेको छु’ प्रशिक्षक टमाटाले भने ।
नेपाली टोलीको पुरानै समस्या हो ओपनिङ जोडी । नेपालले नियमित ओपनर नपाएको लामो समय भइसक्यो । युवा टोलीका सुनील धमला र दिलिप नाथलाई ओपनिङ जोडीको रुपमा स्थापित गराउने योजना बनाएका छन्, प्रशिक्षकले ।
दिलिपनाथले विकेट किपिङ पनि गर्नेछन् । तर, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र अनिल साह पनि बैकल्पिक विकेटकिपरको रुपमा तयार छन् । अनिलकुमार साहले हालै सम्पन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिग र्इपीएलमा लोभलाग्दो प्रदर्शन गरेका थिए । फाइनलमा उनकै प्रदर्शनको सहयोगमा विराटनगर वारियर्सले उपाधि जितेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : को हुन् मेसी र नेइमारभन्दा धनी फुटबलर ?
युवा बलरहरु ललित राजवंशी र रशिद खान पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा छन् । उनीहरु ईपीएलकै प्रदर्शनको आधारमा बोलाइएका हुन् । ईपीएलका ‘मस्ट भ्याल्युएबल प्लेयर’ रोहितकुमार पाौडेलदेखि सिद्धान्त लोहनीसम्म अहिलेको प्रारम्भिक टोलीमा परेका छन् ।
केहि महिनाअघि बंगलादेशमा सम्पन्न यू-१९ एशिया कपमा शानदार प्रदर्शन गर्दै क्रिकेटको महाशक्ति भारतलाई पराजित गर्ने नेपाली टोलीका अधिकांश सदस्य बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका छन् । ‘अहिले टिममा परेका सबै खेलाडी क्षमतावन छन्, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेरै यहाँसम्म आएका हुन्’ प्रशिक्षक टमाटाले भनेका छन्, ‘उनीहरुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, राम्रो खेल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
त्यसमा सहमत कप्तान पारस भन्छन्, ‘पहिलाको जेनेरेसनको मेहनतको फल हाम्रो पालामा भोग्यौं, हाम्रो परिश्रमको परिणाम नयाँ जेनेरेसनलाई दिने बेला आयो ।’
डिभिजन-टू लगतै आईसीसीको निर्णय
डिभिजन टू लगतै आईसीसीको बैठक बस्नेछ, जसले नेपाली क्रिकेटबारे निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ ।निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभाले सल्लाहकार समूहमा भएको सहमति भन्दा केही फरक प्रावधान राखेर विधान अनुमोदन गरेकोमा आईसीसी सन्तुष्ट छैन । आईसीसीले डिसेम्बर २२ सम्म लिखित जवाफ पठाउन भन्यो र क्रिकेट संघले आफ्नो दाबीसहित जवाफ पनि पठाएको छ ।
आईसीसीको टोली छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउन र सम्वद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । भ्रमण टोलीले आईसीसीको साधारणसभामा नेपालसम्वन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेछ । यो बैठकले नेपालको सदस्यता खारेज वा निलम्बन फुकुवा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ । कतिपयले भने डिभिजन टूमा नेपालको प्रदर्शनमा पनि यो भर पर्ने बताउने गरेका छन् । यो खबर हामीले अनलाइन खबर डटबाट साभार गरेका हौ ।